चलचित्र "गोर्खे "को पोस्टर सार्वजनिक । चैत्र २८ गते देखी प्रदर्शनमा आउने तयारीमा । - Namaste Online TV
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका-३ ले निःशुल्क खाना खुवाउने कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरिएको छ( भिडियो सहित)
लाखौ प्रदेशी युवाहरुको कथामा बिबि अनुरागीको लोक गीत “करौती” सार्वजनिक (भिडियो)
गायिका सिर्जु अधिकारीको तीजको गीत ‘हाई मेरी पियारी’TikTok मा प्रिय बन्दै (भिडियो सहित )
गायक रोशन सिंह र बिमल अधिकारीको 'पिपल छेउँमा बर' टिकटकमा १ नम्बर पोजिसनमा (भिडियोसहित)
एलिना र मनिषकाे “घरकाे छतमा”तिज गित TRENDING मा (भिडियो सहित)
दुई चर्चित गायिका टिका सानु र भुमिका गिरीको तिज गीत 'बुट्टा भरेको' ले चर्चा बटुल्दै ( भिडियो सहित )
जानकी तारामीमगर र बिक्रम रानाको ओई माया”सार्वजनिक भएको छोटो समयमा चर्चा बटुल्दै (भिडियो सहित)
गायिका पिर्ती आलेले जुन गीत गाए पनि हिट - रमेश राज संग 'मै आउछु उडेर' भन्दै ( भिडियो सहित )
नायिका एलिना रायमाझीको चर्चा संगै नेत्र भण्डारीको “बनपालेको लौरी’ सार्वजनिक(भिडियो सहित)
गायिका श्रीषा कुवँर को आवाजमा रहेको कभर गीत ‘के यो माया हो ’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
चलचित्र “गोर्खे “को पोस्टर सार्वजनिक । चैत्र २८ गते देखी प्रदर्शनमा आउने तयारीमा ।
नमस्ते अन्लाईन टिभी :कोजु ईन्टरटेन्टमेनको ब्यानरमा हरि लामाको प्रस्तुति र तिर्थ राम कोजु र हरि थापाको निर्माणमा तयार भएको सिनेमा “गोर्खे ” पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ।
सार्वजनिक भएका दुई पोस्टरमा अभिनेता रविन्द्र प्रताप सेनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । एउटामा सैनिक पोशाकमा रविन्द्र हातमा बन्दुक बोकेर क्रोद्धित मुद्रामा देखिएका छन् भने अर्कोमा हातमा खुकुरी बोकेर दौडिरहेका छन् । यसअघि “सिन्के अचार ” र गाउँ भरि हल्ला भो ” बोलको गीत सार्वजनिक गरेर दर्शक श्रोताको मन जितेको यस सिनेमाले चैत्र २८ गते लाई प्रदर्शन मिति तय गरेको थियो । तय गरेको मितिमा कोरोना प्रभावले गर्दा सो मितिमा अब सिनेमा रिलिज भने नहुने भएको बताए निर्माण निर्माण पक्षले । पाल्पा ,बर्दघाट,धम्पुस,पोखरा र काठमाण्डौ लगायत नेपालको रमणीय स्थानहरुमा छायांकन गरिएको यस सिनेमालाई निर्देशक किम्मत गौतमले निर्देशन गरेका हुन ।. गोर्खे बन्ने सपना बोकेका ५ युवाहरुको पात्र लाई सिनेमामा देख्न पाईने बताए निर्माता हरि थापाले।
सिनेमामा रबिन्द्र प्रताप सेन,अन्जली अधिकारी,अर्जुन गुरुङ्ग,आश्मी लामा,आश्मी श्रेष्ठ,एन्जेल श्रेष्ठ ,बाल्दिप राई लगायतकाको प्रमुख अभिनय रहेको छ।
सौरब लामा र निरज कंडेलले खिचेको यस सिनेमाको कथा भने काजी लिम्बुले लेखेका हुन। करिब ४५ दिनमा छायांकन सकिएको छिन्दु पाख्रिन र हरि लम्सालको संगीत रहेको छ । हाल लाई
नेपाल प्रदर्शन मिति तय नभएको यस सिनेमाको अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा शो पनि केहि समय पछी सरेको बताए निर्माता निर्माता हरि लामाले। “हामीले नेपाल प्रदर्शन मिति तय गरेका छैनौ तर बिदेशको केहि शो पस्चात भने नेपाल रिलिज मिति तय गर्नेछौ” निर्माता हरि लामाले हामि संग भन्नुभयो।
मित्र डी गुरुङको सम्पादन रहेको छ ।
कोरोनाभाइरसले : इटलीमा एक दिनमा ९०० भन्दा बढीको मृत्यु ।
टिलिक्क टल्केको अनुहार पोस्टर भित्र हुदैमा चलचित्र चल्छ भन्ने हरुको लागी कडा जबाफ दिदै धूम ३
नेपाली चलचित्रमा छेत्रमा आशा गरिएको नायक इशक राई चलचित्र ‘आरुसी ‘ मार्फत आउदै
मखमली मखमलीको ट्रेलर सार्बजनिक चलचित्र मंसिर १३ गते बाट प्रदर्शन हुँदै ।
गीत लेखेर विभिन्न १४ वटा विश्व रकेर्ड राखेका डा. डीआर उपाध्यायको कथा ।
मसेल देबिस्थान का युवाहरु र स्थानीय बासिन्दा हरुले गरे लकडाउन को सदुपयोग